Nei Flex naApollo Vachakunda | Martech Zone
Nei Flex naApollo Vachakunda
Svondo, Kubvumbi 1, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nezuro manheru ndakapedza manheru iine shamwari.
Maawa matatu ekutanga akashandiswa pa Miganhu kushanda kune saiti yevatengi iyo yanga iine cross-browser quirks. Iyo saiti yakanyorwa yakakwana, inoshanda CSS. Nekudaro, neFirefox 2 paPC mabara emenyu runyorwa aive neyakaipisisa pikisheni yekuchinja uye paInternet Explorer 6, imwe yemaitiro eCSS haina kushanda zvachose.
Firefox 2 (tarisa iko kusanzwisisika pixel shanduko inoita kuti iratidzike kunge iticicized):
Aya ndiwo maitiro aanofanira kutarisa.
Izvo izvo apuro, Mozilla, Microsoft, uye dhanzi havakwanise kunyora mafomu anoshandisa iyo Webhu Standard inofanira kunge ichinyadzisa kune mumwe nemumwe wavo. Ini ndaigona kunyatsonzwisisa kana bhurawuza rega rega riine maficha ayo aigona kutsigirwa kuburikidza nekwavo kunyora - asi izvi ndizvo zvinhu zvekutanga.
Uyu muenzaniso wakanaka wekuti nei Apollo uye Flex mira mukana wakanaka wekutsvaira Internet. Ini ndakanyora mazuva mashoma apfuura nezve Scrapblog, chikumbiro chakanyorwa muFlex (uye nekukurumidza chakaendeswa kuna Apollo). Kana usati wawana mukana wekuzviona - enda undozviedza - hachisi chinhu chipfupi chinoshamisa.
Flex inomhanya pasi Adobe Flash's browser plugin. Ichi plugin icho 99.9% zvizhinji yeInternet inomhanya (uri kumhanya pese paunotarisa vhidhiyo yeYouTube). Apollo inoshandisa injini imwechete asi inokutendera kuti umhanye muhwindo rekunyorera pane kungogumira kubrowser.
Chii chinonzi Flex?
From Adobe: Iyo Flex yekushandisa sisitimu ine MXML, ActionScript 3.0, uye iyo Flex kirasi raibhurari. Vagadziri vanoshandisa MXML kutsanangura zvine mutsindo mashandisirwo emashandisirwo emashandisirwo uye vanoshandisa ActionScript kune manyorerwo evatengi uye maitiro ekudzora. Vagadziri vanonyora MXML uye ActionScript sosi kodhi vachishandisa iyo Adobe Flex Builder? IDE kana yakajairika zvinyorwa zvemavara.
Tichifunga nezve kushushikana kwedu pakuvaka muchinjiko-browser yakapusa menyu, fungidzira kuyedza kuvaka iyo yose webhu application inotsigirwa pamabhurawuza ese! Pakupedzisira, vagadziri vanofanirwa kunyora hacks kana browser-yakatarwa script kuti vaone zvakafanana chiitiko zvisinei nekuti ndeupi rudzi rwebrowser kana desktop iwe yaunowana iwe uchishanda pairi. Hapana cross-browser nyaya uye iyo yekuwedzera mukana wekuisa zviri nyore iko kunyorera kuna Apollo kumhanya mukati kana kunze kwebrowser.
Kunze kwekusanetseka kuti inotaridzika sei mubrowser yega yega, kune zvimwe zvakanaka. Kunyorera Flex kunoita kwete inoda hunyanzvi hwekuita zvirongwa. Ini ndinofunga ndosaka vazhinji vema programmers vachiseka pakushandisa Flex kana Adobe. Ivo vangatoda kuti iwe upedze makumi ezviuru zvemadhora uine ivo kuti vagadzire chimiro muASP.NET iyo inotora mitsara mishoma ye MXML.
Kana iwe uchida kuramba uchienderana naFlex naApollo, nyorera kushamwari yangu bhurogu.
Reader Kuwana Matanho emaNew Blogger
Technorati Inodzokorodza Zvishandiso Peji ... pamwe nezvimwe Zvishandiso Zvakanakisa!
Apr 2, 2007 pa 7: 08 AM
Wataura zvakanaka Doug. Kana iyo yekushambadzira tekinoroji vakomana vakaiwana, ndine tariro huru kune vakawanda vanogadzira 😉
Apr 4, 2007 pa 3: 28 AM
> Iyi plugin iyo 99.9% yeInternet inomhanya
Iwe unogona kuda kutarisa yako kwaunobva kune iyo nhamba ... 🙂
Hezvino, Kubvumbi 2007 uye ini handisati ndine mutengi wemwenje unomhanya pasi peUbuntu x86_64 (AMD64) desktop nharaunda.
Apr 4, 2007 pa 9: 55 AM
Stephen – uri right… iyi nhamba isina humbowo. Muchokwadi, ndizvo zvinozivikanwa sea SWAG.
Ndine urombo pamusoro pazvo!
Apr 16, 2007 pa 11: 43 AM
Heino chinongedzo chine chekuita nekupinda kweFlash - parizvino 84.3% kupinda neFlash Player 9.
Aug 21, 2007 na11:15 PM
Wataura zvakanaka Doug, Kupinda kwakanaka Stephen.
Aug 27, 2007 na2:30 PM
Hmm.. Iyi tekinoroji inonakidza chaizvo. Ini handisi programmer, asi sezvaunonyora hazvidi. Waita zvakanaka, ndichaenda kunotarisa.
Gumiguru 22, 2007 pa 9:18 AM
Nyaya inofadza zvikuru, ichafunga nezvazvo.